Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Turkiga » Turkiga ayaa ku hanjabay inuu eryi doono Mareykanka iyo 9 safiir oo kale
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga
Wakiilada Jarmalka, Kanada, Denmark, Finland, Faransiiska, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden iyo Mareykanka ayaa looga yeeray Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga hadal ay ku sheegeen "mas'uuliyad darro".
Ganacsade iyo Samafale u dhashay dalka Turkiga, Osman Kavala, ayaa tan iyo dabayaaqadii sannadkii 2017-kii ku xirnaa xabsi aan wax dambi ah lagu helin.
Kavala ayaa wajahaya eedeymo aad u fara badan, oo ay ku jiraan maalgelinta mudaaharaadyada ka dhanka ah Erdogan iyo ka qeybgalka afgambigii dhicisoobay ee 2016.
Taageerayaasha Kavala waxay aaminsan yihiin inuu yahay maxbuus siyaasadeed, oo loogu talagalay shaqadiisa xuquuqul insaanka ee Erdogan 'kaligii taliye sii kordhaya' ee Turkiga.
Mar uu maanta khudbad fagaare ah ka jeedinayay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaca ka qaaday in uu amar ku siiyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka in uu ku dhawaaqo 10 safiir oo dibadda ah Turkey, oo ay ku jiraan ergeyga Mareykanka, 'persona non grata'.
“Waxaan siiyay tilmaamaha lagama maarmaanka u ah wasiirkeenna arrimaha dibadda, waxaan idhi waxaad sida ugu dhaqsaha badan u maareyn doontaa cambaareynta 10 -ka safiir,” ayuu yiri Erdogan.
ErdoganCadhada ayaa ka dhalatay bayaan wadajir ah, oo ay sii daayeen 10 safiir horaantii toddobaadkan.
Wakiiladu waxay ku booriyeen in si degdeg ah oo cadaalad ah xal loogu helo kiiska Osman Kavala – oo ah ganacsade iyo samafale Turki ah oo ku xidhan xabsiga iyada oo aan wax dembi ah lagu helin ilaa dabayaaqadii 2017.Erdogan mudaaharaadyo iyo ka qayb galka afgambigii dhicisoobay ee 2016-kii. Taageerayaasha Kavala, si kastaba ha ahaatee, waxay aaminsan yihiin inuu yahay maxbuus siyaasadeed, oo lagu bartilmaameedsaday shaqadiisa xuquuqul insaanka ee kaligii-talisnimada sii kordheysa ee Erdogan. Turkey.
Bayaanka wadajirka ah ayaa la daabacay si loogu dabaaldego sannad-guuradii afraad ee Kavala markii ugu horreysay ee la xiray. Ganacsadahan ayaa horay maxkamad loo soo taagay waxaana lagu sii daayay labo jeer dambiyo la xiriira qalalaasihii beerta Gezi Park 2013 iyo afgambigii dhicisoobay ee 2016-kii. Si kastaba ha ahaatee, tani, si kastaba ha ahaatee, ma aysan sameynin Kavala wax wanaag ah, sababtoo ah amarada sii deyntiisa ayaa lagu soo rogay eedeymo cusub isla markiiba ka dib markii la sii daayay.
Isla markiiba ka dib markii la sii daayay bayaanka wadajirka ah, ergada Jarmalka, Canada, Denmark, Finland, France, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden iyo Maraykanka ayaa looga yeeray Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga "mas'uuliyad-darro" hadalkooda iyo "siyaasadeynta [ ee] kiiska Kavala."